Heisei vs. Shôwa Rider: Kamen Rider Taisen featuring Super Sentai (2014) – Myanmar Subtitles
Heisei vs. Shôwa Rider: Kamen Rider Taisen featuring Super Sentai (2014)
Genre: Action Director: Takayuki Shibasaki Actors: Gaku Sano, Mahiro Takasugi, Yûki Kubota, Yutaka Kobayashi Country: Japan Released: 29 Mar 2014 Score: 7.2 Duration: 98 min Quality: Bluray 720p Years: 2014 View: 763
Kamen Rider Sowa Rider vs Heisei rider (2014)
ဒီကားက Kamen Rider ပထမ မြိုးဆကျ နဲ့ ဒုတိယ မြိုးဆကျ အမှနျအကနျ ဖိုကျကွတဲ့ ကားပေါ့ ရှိသမြှ Kaman Rider တှေ အကုနျ ပါမယျ အထူးအနနေဲ့
Super Santai ပါ ပါပါဦးမယျ cross over တှေ ကွိုကျတဲ့ ဘယျသူမဆို ကွညျ့သငျ့ပါတယျ ဇာတျလမျးကလညျး ကွညျ့လို့ ကောငျးပါတယျ ဘကျဂကျြနညျးနညျး နဲ့ ရိုကျထားတယျ ဆိုပမေဲ့ သူဟာနဲ့သူတော့ ကွညျ့လို့ကောငျးပါတယျ 3D တှေ ဘာတှေ မထှကျနိုငျတာတော့ ဘယျတကျနိုငျပါမလဲဇာတျလမျးက kaman Rider Gaim နဲ့ စတာပေါ့ movie စတာနဲ့ကို kamen rider battleတှေ ကိုမွငျတှရေ့မှာပါ စစခငျြးမှာ kamen Rider gaim က မီးရထား ဆောကျလုပျရေး သမားတှေ တှတေဲ့ ပွတျရှကွေ့ောငျးကို တှပွေီ့း သှားစုံစမျးကွတာက စတာပါပဲ အဲ့ ပွတျရှကွေ့ောငျးက တဈဆငျ့ တဈခွားကမ်ဘာ ကို ရောကျသှား ကွတယျ ပေါ့ အဲ့ ကမ်ဘာမှာ ကြှနျတျော တို့လို့ လူသား ကောငျလေးတဈယောကျကို တှပွေီ့း gaim က ဒီဘကျကမ်ဘာကို ပွနျချေါလာတယျ အဲ့မှာ ပွဿ နာ ကစတာပဲ သူချေါလာတဲ့ ကလေးကို မကောငျးဆိုးဝါးတှကေ မရမက လိုကျဖမျးနကွေတယျ ပွီးတော့ အငွိမျးစား Sowa Rider တှေ ကလညျး ပွနျပျေါလာပွီ လကျရှိ Heisei Rider တှကေို ဗငျြးတယျ ကဲ old Rider တှကေ new Rider တှကေို ဗငျြးတာ တှေ cross over အမိုကျစားတှနေဲ့ ဘာဆကျဖွဈမလဲသိခငျြရငျဖွငျ့ ဒီကားလေးကို ကွညျ့ကွညျ့လိုကျကွပါလို့
(အညှနျးမရေးတကျရေးတကျ ရေးသညျ) :3 Kiss asian ကနေ Download ဆှဲထားတဲ့အတှကျကွောငျ့မလို့ Eng Subtitle တှကေမပြောကျပါဘူး အဲ့တာကွောငျ့ မွနျမာစာကိုအပျေါကအဝါရောငျနဲ့အုပျပွီး Encode လုပျပေးထားပါတယျ။
IMDb Score – 7.0/10
IMDb 7.0 ရထားတဲ့ဇာတျကားမလို့ Kamen Rider Fan တှအေတှကျကွညျ့ကောငျးတဲ့ဇာတျကားတဈကားဖွဈမှာပါ။
Translated By Aung Ye Moe And Encoded By Lin Htike Aung
Download Type – Openload, Megaup, Myandrive
Download Size – 823 mb (720p Bluray)
Download Link – First Comment
ဒီကားက Kamen Rider ပထမ မျိုးဆက် နဲ့ ဒုတိယ မျိုးဆက် အမှန်အကန် ဖိုက်ကြတဲ့ ကားပေါ့ ရှိသမျှ Kaman Rider တွေ အကုန် ပါမယ် အထူးအနေနဲ့
Super Santai ပါ ပါပါဦးမယ် cross over တွေ ကြိုက်တဲ့ ဘယ်သူမဆို ကြည့်သင့်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းကလည်း ကြည့်လို့ ကောင်းပါတယ် ဘက်ဂျက်နည်းနည်း နဲ့ ရိုက်ထားတယ် ဆိုပေမဲ့ သူဟာနဲ့သူတော့ ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် 3D တွေ ဘာတွေ မထွက်နိုင်တာတော့ ဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲဇာတ်လမ်းက kaman Rider Gaim နဲ့ စတာပေါ့ movie စတာနဲ့ကို kamen rider battleတွေ ကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ စစချင်းမှာ kamen Rider gaim က မီးရထား ဆောက်လုပ်ရေး သမားတွေ တွေ့တဲ့ ပြတ်ရွေ့ကြောင်းကို တွေ့ပြီး သွားစုံစမ်းကြတာက စတာပါပဲ အဲ့ ပြတ်ရွေ့ကြောင်းက တစ်ဆင့် တစ်ခြားကမ္ဘာ ကို ရောက်သွား ကြတယ် ပေါ့ အဲ့ ကမ္ဘာမှာ ကျွန်တော် တို့လို့ လူသား ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို တွေ့ပြီး gaim က ဒီဘက်ကမ္ဘာကို ပြန်ခေါ်လာတယ် အဲ့မှာ ပြဿ နာ ကစတာပဲ သူခေါ်လာတဲ့ ကလေးကို မကောင်းဆိုးဝါးတွေက မရမက လိုက်ဖမ်းနေကြတယ် ပြီးတော့ အငြိမ်းစား Sowa Rider တွေ ကလည်း ပြန်ပေါ်လာပြီ လက်ရှိ Heisei Rider တွေကို ဗျင်းတယ် ကဲ old Rider တွေက new Rider တွေကို ဗျင်းတာ တွေ cross over အမိုက်စားတွေနဲ့ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲသိချင်ရင်ဖြင့် ဒီကားလေးကို ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြပါလို့
(အညွှန်းမရေးတက်ရေးတက် ရေးသည်) :3 Kiss asian ကနေ Download ဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Eng Subtitle တွေကမပျောက်ပါဘူး အဲ့တာကြောင့် မြန်မာစာကိုအပေါ်ကအဝါရောင်နဲ့အုပ်ပြီး Encode လုပ်ပေးထားပါတယ်။
IMDb 7.0 ရထားတဲ့ဇာတ်ကားမလို့ Kamen Rider Fan တွေအတွက်ကြည့်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်မှာပါ။
Megaup.net Myanmar 720p
(823MB) Download Openload.co Myanmar 720p
(823MB) Download Myandrive.com Myanmar 720p
#Heisei vs. Shôwa Rider: Kamen Rider Taisen featuring Super Sentai (2014) #Download Heisei vs. Shôwa Rider: Kamen Rider Taisen featuring Super Sentai (2014) Full Movie #Free Heisei vs. Shôwa Rider: Kamen Rider Taisen featuring Super Sentai (2014) Download
One response to “Heisei vs. Shôwa Rider: Kamen Rider Taisen featuring Super Sentai (2014)”
website on my iphone during lunch break. I really like the information you present here and can’t wait to takealook when I get home.
Dominion (2014) Season 01 Complete
Kamen rider Ryuki (2002)
Into the Badlands Season 02 (2015) Complete